Igbo, John: Lesson 038 - Ndị àmà anọ ahụ na-ahụ chi nke Kraịst (Jọn 5:31-40) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 038 (Four witnesses to Christ's deity)
4. Ndị àmà anọ ahụ na-ahụ chi nke Kraịst (Jọn 5:31-40)
31 Ọ buru na Mu onwem ab͕ara Onwem àmà, àmàm abughi ezie. 32 Onye ọzọ nāb͕aram àmà. Amaara m na ihe akaebe nke ọ na-agba akaebe m bụ eziokwu. 33 Unu onwe-unu ezigawo Jọn, ọ b͕a-kwa-ra àmà nye ezi-okwu. 34 Ma àmà nke Mu onwem nānata abughi madu. Otú ọ dị, ana m ekwu ihe ndị a ka ewe zọpụta gị. 35 Ọ bụ oriọna na-enwu enwu ma na-enwu enwu, ị dị njikere ịṅụrị ọṅụ ruo oge ụfọdụ n'ìhè ya. 36 Ma àmà nke Mu onwem nwere uku di uku kari nke Jọn: n'ihi na ọlu nke Nnam nyerem ka m'luzu, ọbuná ọlu nke Mu onwem nēme, nāb͕aram àmà, na Nnam zitewom. 37 Nna m, onye zitere m, agbawo àmà banyere m. Ị nụbeghị olu ya n'oge ọ bụla, ma ọ bụ hụ ụdị ya. 38 Unu enweghi okwu-Ya nime unu; n'ihi na unu ekweghi Onye Ya onwe-ya zitere. 39 Unu onwe-unu nāchọ ihe edeworo n'akwukwọ nsọ, n'ihi na unu nēche na unu nwere ndu ebighi-ebi nime ha; ma ndia bu ndi na-agba akaebe banyere m. 40 Ma unu agaghi-abiakutem, ka unu we nwe ndu.
Jizọs gwara ndị iro ya na ya nwere ikike ịrụ ọrụ nke Mezaịa ahụ e kwere ná nkwa. Ha kpọrọ onye obodo a asị nke na-eme ka òtù na iwu ha kwụsị. Ha rịọrọ maka ihe akaebe iji chọpụta ihe ndị ọ na-ekwu, n'ihi ya, Jizọs wedara onwe ya ala ịzaghachi arịrịọ ha site na ihe akaebe. Anyị niile na-eche onwe anyị ka anyị dị mma karịa anyị. Jisos weputara ya onwe ya n'enwegh ihe obula. Akaebe ya bụ eziokwu n'agbanyeghị na iwu na-agbakarị onye àmà n'onwe ya. Kraist a nakweere n'ikwu, "O buru na m agba akaebe n'onwe m; ihe akaebe m abughi eziokwu." Okwesighi igosiputa onwe ya, ebe onye ọzọ gbaara ya àmà, Nna ya nke eluigwe, bụ onye kwadoro ya ihe ịrịba ama anọ ma ọ bụ ihe àmà anọ.
Chineke zitere Baptist ka ọ kpọsaa Kraịst n'etiti ụmụ nwoke. Onye na-agba ọsọ a gbara àmà banyere Kraist na ozi ya dịka Oku na ọrụ ya dịka Onyeikpe. Otú ọ dị, Ụlọikpe Kasị Elu kwenyesiri ike na Jọn ma jụ àmà ya nye Jizọs (Jọn 1:19-28). Ihe àmà Jọn abụghị ihe kpatara Jizọs, ma ọ bụ n'ike mmụọ nsọ ya, kama Jizọs bụ ihe ọ bụ site na mgbe ebighị ebi. N'ihi amaghị nke ndị mmadụ, Jizọs nakweere àmà Onye Baptist ahụ ka ọ na-akwado eziokwu ya ọzọ. Onye Baptist enwegh ike ikwubiga okwu ókè mgbe o kwuru na Jisos bu Nwa aturu Chineke nke wepu nmehie nke uwa.
Baptism bụ oriọna na-enwu n'ehihie, na-akpọkọta ìgwè ndị na-eso ụzọ ya gburugburu ka ha ghọtakwuo ya. Ma mgbe Sun bilitere na Onye nke Jizọs, ọ dịghị mkpa maka oriọna. Naanị Jizọs bụ Ìhè nke Ụwa na ike na-adịghị agwụ agwụ. Dị nnọọ ka anyanwụ na-eweta ndụ na uto n'elu ala, otú a ka Jizọs na-enye ndụ ime mmụọ na ịhụnanya. Ngwọta ya na ọhụhụ ya gosipụtara mmeri ya banyere ìhè. Mmiri nke oké ifufe ahụ na ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ gosipụtara chi ya. Ọrụ ya kwekọrọ na Nna. O kwusiri ozi ya n'osisi na site na nbilite n'onwu ya, o wukwasiri ndi ahu ndi kwere na ya. Ọrụ nke Chineke ga-emezu n'oge ọbịbịa nke Kraist nke ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ ma kpee ụwa ikpe. Enweghị ọdịiche dị n'etiti Nna na Ọkpara na ọrụ ha: Dị ka Nna na-arụ ọrụ, otú ahụ ka Ọkpara ahụ dịkwa.
Chineke n'onwe Ya mere ka olu ya nuru anyi ka anyi nuru nnukwu nkwuputa, "Onye a bu Okpara Mhuru n'anya, onye ihe ya di m ezi nma." (Matiu 3:17). o Dighi onye obla nke natara ihe di otú a maob ghi ma Jizos b¹ onye biri dika ezi Chineke si di. Ọkpara ah h n'anya ah juptara n'ezi ihn'anya naocha.
Jizos gwara ndi Juu na ha amaghi Chineke. Ha enweghi ike inu olu Ya nime Iwu ah maob ndi Amma ma ha ahughi ihu Ya n’uzo anya n'ohuu ma o bu nrọ. Nkpughe nile gara aga bụ ntụpọ, ebe mmehie ha kewara ha site na Onye Nsọ. Dị nnọọ ka Aịsaịa tiri mkpu mgbe ọ hụrụ ụgbọ okporo ígwè nke Chineke n'ụlọ nsọ ahụ, "Ahụhụ ga-adịrị m n'ihi na adịkwaghị m, abụ m nwoke na-adịghị ọcha egbugbere ọnụ." Ihe ngbagwoju anya maka ogbi nke ha na enwegh uche bu ihe ha choro nke Kraist, Okwu Chineke. Onye chere na ya na-aghota Okwu Chineke, ma o juru Jisos okwu nke Chineke, nke a na-egosi na o anataghi ezi nkpughe ma o bughi ya.
Ndị nke Agba Ochie achọrọ Akwụkwọ Nsọ, na-enwe olileanya inweta ndụ ebighi ebi. Kama nke ahụ, ha hụrụ akwụkwọ nwụrụ anwụ nke Iwu ahụ. Ma, ha naghaghi nkwa nile nke na-ezo aka na Mezaịa ahụ, ọ bụ ezie na amụma dị otú ahụ dị ọtụtụ n'Agba Ochie. Ha choro echiche nke onwe ha, ihe omuma ha na ukpuru ha, ha adighi-amata na Kraist bu okwu ikpe nke Chineke n'etiti ha.
Jizos gosiputara ha ihe mere ha ji ju ya - ichota Chineke dika O di. Ha kpọrọ Kraist asị ma wee nwụọ ndụ ebighi ebi, na-efu ihe okwukwe na amara.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-ekele gị maka ịhụ ndị iro gị n'anya, ị na-ewute n'ihi enweghị okwukwe ha. I gosiri ha ndị àmà anọ ahụ nye chi gị. Nyere anyi aka ichota ozi oma na akwukwo nso ndi ozo iji hu gi, ma choputa chi gi, ma kwenye na oru gi ma nweta ndu ebighebi. Meghee nti nke ọtụtụ nde mmadụ ka na-anụ ntị ka ha nụrụ olu gị n'ụbọchị anyị.
Ole ndị bụ ndị àmà anọ ahụ, gịnịkwa ka ha na-agba àmà?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:59 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)